Dell EMC Nyika: 10 Mitemo Inoshandura Ruzivo Technology | Martech Zone
Monday, May 22, 2017 Chishanu, Mbudzi 17, 2017 Douglas Karr
Wow, akadii mavhiki mashoma! Kana iwe wakacherekedza ini ndanga ndisiri kunyora kakawanda, imhaka yekuti ini ndakaita imwe heck yerwendo kuenda Dell EMC Nyika uko Mark Schaefer neni takave nerukudzo rwekubvunzurudza hutungamiriri kumakambani eDell Technology avo Luminaries podcast. Kuisa musangano uyu mumaonero, ndakafamba mamaira 4.8 pazuva rekutanga uye ndakaenzana 3 mamaira zuva rega rega mushure me… uye izvo zvaive nekutora zororo nguva dzose nekuwana makona ekuti rimwe basa riitwe. Ndingadai ndakafamba kaviri daro uye ndikarasikirwa nezvakakura zvemukati uye mharidzo.
Kunyange musangano uyu wanga wakanangana netekinoroji, zvakakosha kuti kushambadzira matekinoroji azive zviri kuuya paruzivo rwetekinoroji. Makambani atove kuvimba netekinoroji mune zvese zvikamu zvebhizinesi ravo - uye ramangwana rinounza nekwanisi yekushandura zvese zvimwe zvinhu.
Usati watarisa mamwe mazwi chaiwo, zvakakosha kuti unzwisise kuti chii IT Shanduko inotsanangurwa se uye kuti makambani anogona sei kuongorora avo shanduko maturity.
Kuchinja yako IT kunotanga nekugadzirisa maitiro esangano rako kune zvigadzirwa. INOFANIRA kufungidzirwa sesimba rinotyaira kuzadzisa zvinangwa zvebhizinesi, kwete kugadzirisa uye kuchengetedza mwenje. Yemazuva ano data Center yakagadzirirwa kukurumidza mhedzisiro.
Mune mamwe mazwi, isu tese tiri kuve zvigadzirwa makambani. Uye iwo makambani ari kuvandudza mapuratifomu avo, kuhaya vashandi chaivo, uye kuona kuchengetedzeka kuri musimboti vari kuona kuchengetedza kwakasarudzika kuri kuvhura mabhajeti ari kuvhura zvigadzirwa nemasevhisi. Heano mamwe ematemu aunofanirwa kutanga kunzwisisa uye kufunga nezvekuti vachachinja sei kambani yako uye nezvinotarisirwa nevatengi vako munguva pfupi iri kutevera:
Convergence - zvivakwa zvakachinjika (CI) zvinounza pamwe zvakakosha zvinhu zve data centre - komputa, chengetedzo, network, uye kuona. Hapanazve kumisikidzwa kwemunhu mumwe, ingori chikuva chinokwenenzverwa zviri nyore nemhedzisiro yekutarisirwa.
Hyper-kusangana - inonyatsobatanidza zvinhu zvina, ichideredza kudiwa kwehunyanzvi uye kusangana uye zvakanyanya kudzikisira njodzi yezvikanganiso kana nguva yekuzorora.
Virtualization - Kunyange masisitimu akavezwa anga aripo kwemakumi maviri emakore, iko kugona kwekugadzirisa pamatanho kwatova pano. Makambani ari kutogadzira munzvimbo dzenharaunda kana dzakarongedzwa nharaunda dzinoendeswa mukugadzirwa pazvinenge zvichidikanwa. Virtualization software inoda mashoma uye mashoma masisitimu uye iwedzere uye iwedzere kungwara sezvo ichiongorora uye ichiita kune zvinoda.
Kuramba Uchirangarira - yemazuva ano komputa inoenderana nezvose zvakaoma kuchengetedza pamwe nendangariro, nemakomuputa achifambisa data kumashure nekudzoka. Persistent memory inoshandura komputa nekuchengetedza chengetedzo mundangariro uko inogona kuverengerwa. Server inoshanda masisitimu ichave yakagadziridzwa ichiona zvakapetwa kagumi zvakapetwa kumhanyisa kwemaseva ezuro.
Cloud Computing - Isu tinowanzo tarisa pagore sechimwe chinhu chakanangana nesoftware yedu, yedu yekuchengetera, kana edu ekuchengetedza masisitimu ari munzvimbo dzedata nzvimbo. Zvisinei, iyo gore zvenguva yemberi zvinogona kuve zvakangwara uye kuisa mukati-mumba, kure-pfupi, kana makore ekugadzira kwese kwese.
chakagadzirwa Intelligence - nepo vatengesi vachinzwisisa AI sekugona kwesoftware ku funga uye inogadzira yayo software. Kunyangwe izvi zvichinzwika sekutyisa, zvinonakidza zvechokwadi. AI ichapa mukana wezvivakwa zveIT kukwirisa, kudzikisa mutengo, uye kugadzirisa nyaya pasina kupindira.
Natural Language Processing - makambani akaita seAmazon, Google, Microsoft, uye Siri vari kufambira mberi NLP uye kugona kwemaitiro ekuita uye kupindura mirairo yakapusa. Asi kufambira mberi, masisitimu aya anozoshandura nekupindura sehungwaru (kana pamwe zvirinani zvirinani) kupfuura zvinoita vanhu.
Magetsi Komputa - kana iwe ukavhara mune yekudyira, haufunge nezve izvo zvinoda, iyo grid, iyo amperage, kana backups anodiwa kuti uve nechokwadi chesimba kuchinhu chako. Uku ndiko kutungamira kwemafoni edu enhare, malaptop edu, uye yedu dhata yezvivakwa Munzira dzakawanda, isu tatoveko asi zviri kuwedzera kuva chaicho.
Mixed Reality - simba rekomputa ratiri kukurukura pano rinoramba richikwira kupfuura chero chinhu chataimbofungidzira, zvichitigonesa kufukidza nyika yakawedzerwa kune yedu chaiyo. Izvo hazvizove zviri kure kwazvo kubva zvino tisati tadyidzana nenyika yedu kupfuura iyo iPhone kana Google Magirazi, uye tiine midzi yekumisikidza inosanganisa nyika yedu chaiyo neruzivo rwatinounganidza kusimudzira hupenyu hwese.
Internet Zvinhu - nemitengo iri kuderera, Hardware ichidzikira, bandwidth ichiwedzera, uye komputa ichiva chishandiso, IoT iri kukura zvinogara zvakadaro. Sezvataitaura nenyanzvi kuDell Technologies, takadzidza nezve kuyedza kweIOT mune zvehutano, zvekurima, uye zvimwe zvese zvimwe zvehupenyu hwedu.
Mumwe muenzaniso wakatsanangurwa kwaive kushandiswa kweIT uye kurima uko mhou dzinogadzira mukaka dzakaiswa nemidziyo inoongorora kudya kwadzo uye chikafu kuitira kusimudzira kugwamba kunodiwa mukugadzirwa kwechizi. Iyi ndiyo nhanho yehunyanzvi uye hunyanzvi hwatiri kukurukura neaya matekinoroji. Wow!
Haisi chero imwe yeaya matekinoroji ari kutiendesa kumberi, ndizvo mubatanidzwa wezvose yekukurumidza kuenda kumusika. Tiri kuona kumhanyisa kwetekinoroji isu tisina kumboona kubva pakatangwa Internet ne eCommerce. Uye, sekune shanduko idzodzo, tichaona sezvo makambani mazhinji anotora mugove wemusika kuburikidza nekutora vamwe vazhinji vachisara kumashure. Vatengi vari kuenda kunotora, kuchinjika, uye kutarisira kuti kambani yako izere mari mu tekinoroji kubatsira kwavo ruzivo neako mhando.
Yese kambani ichave tekinoroji kambani.
Kuzivisa: Ini ndakabhadharwa naDell kuenda kuDell EMC World uye ndishande paLuminaries podcasts. Nekudaro, ivo havana kubatsira kunyora iyi posvo saka zvinogona kureva kuti tsananguro dzangu dzadzimwa. Ini ndinoda tekinoroji, asi hazvireve kuti kunyangwe ini ndinonyatsonzwisisa zvese nezvayo!
Tags: aichakagadzirwa njerekushandisa michinagore kadambarikutendeukaDelldell emcdell emc nyikagenomicshyperconvergienceiotkusanganiswa kwechokwadikugadzirisa mutauro mutauronlpkutsungirirakushandurwakushandisa komputavirtualizationVMWare